February 2010 – Everybody Read TChen
ရွှတ် ရွှတ် ရွှတ် ရွှတ် ရွှတ်
Posted on February 20, 2010 February 7, 2018 Categories Haikus, Uncategorized, UncategorizedLeaveacomment on ကျတော့ရဲ့ ၅-၇-၅ ကလေးများ
Totally naked in bed
Feeling totally vulnerable
A naked GOD looking man
Walks towards me and kiss
“Gotameeting at ten
I’ll have to leave”,
Then he looks into my eyes, asked;
I smile satisfactorily and answer,
“It is OK, fine,
Just leave the money on the table”.
Posted on February 19, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် English ကဗျာများ4 Comments on My kind of relation…
မှ = ရိုစီ
သို့ = အဲလက်စ်
အကြောင်းအရာ = ဂျူလီ့ အိမ်ပါတီပွဲ
ဟေး……….ဘယ်လိုလဲ။ မတွေ့ရတာ တော်တော်ကြာသွားပြီနော်။ အဲ့ဒီ “ရုံး” ဆိုတဲ့နေရာကြီး မှာ သူတို့တွေ နင့်ကို သေလောက်အောင်ခိုင်းမနေကြဘူးမှလား။ ဒီတနွေလုံး နင့်ကိုမတွေ့ရ သလောက်ပဲနော်။ ဒါနဲ့ ဒီနေ့ ည ဂျူလီ့ အိမ်မှာ ပါတီပေးမယ် ကြားတယ်။ အဲ့တာ ငါက နင်များ သွားချင်လေမလားလို့။ ငါ တယောက်တည်းချည်းပဲ ဆိုရင် တော့ မသွားချင်ဘူးဟ။ ဒါပေမယ့် ထားပါ နင်က နင့်အလုပ်တွေနဲ့ (ဘာအလုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်) ရှုပ်နေမှာမို့လား။ အဲ့တော့ အချိန် ရရင်သာ ငါ့တီ ဖုန်းဆက်လိုက်။ ဒါမှမဟုတ်လဲ အီးမေးလ်လေးဘာလေး ပြန်ပေါ့။
မှ = အဲလက်စ်
သို့ = ရိုစီ
အကြောင်းအရာ = ပြန်စာ- ဂျူလီ့ အိမ်ပါတီပွဲ
ရိုစီ ၊ စာတိုလေးပဲ အမြန်ပြန်လိုက်တယ်။ အချိန်မရလို့။ အရမ်း အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ ဒီနေ့ ည မအားဘူး။ ဘက်တနီ ကိုလဲ ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ပြောထားတယ်။ ဆော်ရီးပဲဟာ။နင်သွားလိုက်ပါ။ အသေကဲခဲ့။
ရိုစီရေ၊ ပေါ်တူဂေါ ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဟေ့။ ရာသီဥတု ကအရမ်းကိုပူနေတာပဲ။ ငါ့အဖေ
ကတော့ အပူရှပ်နေပြီ။ အမေကတော့ တနေ့လုံး ရေကူးကန်ဘေးမှာ ထိုင်နေတာနဲ့ပဲ
အချိန်ကုန်နေတာပါပဲ။ သိပ်ပျင်းစရာကောင်းတယ်။ ငါ့အရွယ်လူငယ်တွေလဲ သိပ်မတွေ့ဘူး။
ဟိုတယ်က တိတ်ဆိတ်နေတာပဲ (ရှေ့ကပုံမှာပါတဲ့အတိုင်း) ကမ်းခြေပေါ်မှာ ဆောက်ထားတာ
နင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရရင် နင်ပျော်မှာပါ။ နင့်အတွက် နင်ကြိုက်တတ်တဲ့
လျှော်ရည်ဗူး သေးသေးလေးတွေ၊ ရေချိုးတဲ့ ခေါင်းဆောင်းတွေ၊ ဘာညာ သာရကာတွေ
ငါ ဟိုတယ် ကနေ ယူလာခဲ့မယ်။ ရေချိုးပြီးရင်ဝတ်တဲ့ ဝတ်ရုံကတော့ အရမ်းကြီးနေတယ်။ ငါ့
အိတ်နဲ့မဆန့်ဘူး။ ငါပြန်လာရင်တွေ့မယ်နော်။ အဲလက်စ်။
အကြောင်းအရာ = တွေ့ကြမလား?
ဟေး ဘယ်လိုလဲ နင့်ရဲ့ ပိတ်ရက်တွေ? နင်ပြန်ရောက်ကတည်းက ဘာသံမှမကြားပါလား။ ဒီည အပြင်ထွက် တခုခုစားကြမလား?
အကြောင်းအရာ = ပြန်စာ- တွေ့ကြမလား?
ဆော်ရီးပါဟာ။ ပြန်ရောက်ကတည်းက လုံးဝ မအားတာ။ နင့်အတွက်လက်ဆောင်တွေ ပါလာ တယ်။ ဒီနေ့ည မထွက်နိုင်ဘူးဟ။ ဒါပေမယ့် ငါအပြင်မသွားခင်တော့ နင့်လက်ဆောင်တွေလာ ပေးလိုက်မယ်လေ။
မနေ့ည က ပေါ်လဲမလာပါလား။ ငါ့ရဲ့ ရှန်ပူ ဗူးလေးတွေ လိုချင်နေပြီ။
ဒေါနဂေါ ကို ဒီတပတ်ပိတ်ရက်အတွက်သွားပြီ။ ဘက် ရဲ့မိဘတွေက အဲ့မှာ အပန်းဖြေ ရိပ်သာလေးတခုရှိတယ်ဟ။ နင့်လက်ဆောင်တွေကို ပြန်လာမှပဲလာပေးတော့မယ်နော်။
ဘယ်တော့မှ သူများအတွက် မစဉ်းစားပေးတတ်တဲ့ အတ္တသမား ချီးထုတ် သူငယ်ချင်း သို့
ငါဘာလို့ နင့်ဆီကို တကူးတက ဒီစာရေးနေလဲဆိုတော့ တကယ်လို့သာ ငါပြောချင်တာတွေကို နင့်မျက်နှာတည့်တည့်ကြည့်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် နင့် မျက်ခွက်ကို ထိုးမိမယ်ဆိုတာ ငါ့ကိုယ်ငါ သိလို့ပဲ။
နင်ဘယ်သူလဲဆိုတာ ငါမသိတော့တာ တော်တော်ကြာပြီ။ နင့်ကိုလဲမမြင်ရ မတွေပရတာ တော်တော်ကြာသွားပြီ။ နင့်ဆီကနေ ငါ ရနေတာက ရက်ခြား ရက်ခြား ပို့လိုက်တဲ့ အီးမေးလ် တိုလေးတွေ ၊ စာတိုလေးတွေလောက်ပဲ။ နင် အလုပ်ရှုပ်နေတယ်တိုတာ ငါသိပါတယ်။ နင့်မှာ ဘက်တနီရှိနေပြီတိုတာလဲ ငါတာပဲ။ ဒါပေမယ့်…..ဟေး………..ငါက နင့်ရဲက အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း မဟုတ်ဘူးလား?
ဒီနှစ်နွေရာသီဟာ ငါ့အတွက် ဘယ်လိုလဲဆိုတာ နင်တွေးတောင်တွေးမိမှာ မဟုတ်ဘူးမှလား? ကလေးဘဝကတည်းက ငါတို့နှစ်ယောက်ဟာ ငါတို့နှစ်ယောက်ကြားကို ရောက်လာနိုင်တဲ့ ရောက်လာနိုင်မယ့် လူတွေအကုန်လုံးကို ငါတို့ရဲ့ ခင်မင်မှု စည်းဝိုင်းကလေးထဲရောက်လာမှာ စိုးလို့ တွန်းထုတ်ခဲ့ကြတာမှလား။ နောက်ဆုံ နင်နဲ့ ငါ နှစ်ယောက်ထဲကျန်တဲ့အထိလေ။ ငါတို့ သူတို့တွေအားလုံးနဲ့ သူငယ်ချင်းမဖြစ်ချင်လို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။ တကယ်က ငါတို့ ကမ္ဘာ မှာ ငါတို့နှစ်ယောက်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မလိုခဲ့တာမှလား။ ငါ့အတွက် နင်အမြဲရှိခဲ့သလို နင့် အတွက်လဲ ငါအမြဲရှိခဲ့တယ်လေ။ ခုတော့ နင့်မှာ ဘက်တနီရှိနေပြီပေါ့။ ငါ့အတွက်ကတော့ ဘယ်သူမှမရှိဘူး။
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက နင့်ငါ့ကို မလိုတော့ဘူးဆိုတာပဲ။ ခုတော့ ငါ အရင်က ငါတို့ကို ခင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ လူတွေလိုခံစားနေရတယ်။ နင်တမင် အဲ့လိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ တော့ ငါသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်….ထားလိုက်ပါ သူ့ကို ငါဘယ်လောက်တောင်မုန်းနေလဲဆိုတာ ပြောလို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါပြောချင်တာက ငါ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းလေးကို ငါလွမ်းနေတယ်။ အင်း… ပြီးတော့….. ငါအရမ်း အထီးကျန်နေတယ်ဟာ။
အပြင်သွားဖို့ ချိန်းထားတာ နင်ဖျက်လိုက်တိုင်း ငါ အိမ်မှာ ဖေဖေ မေမေတို့နဲ့ TV ကြည့်ရင်းပဲ အချိန်တွေကုန်နေရတာ။ စတက်ဖနီ က အမြဲ အပြင်ထွက်နေတာ၊ ကယ်ဗင်ကလဲ… ငါ့ထက် စာရင်မှ သူ့ဘဝက ပိုသာယာနာပျော်ဖွယ်ရှိသေး။ စိတ်ဓါတ်ကျဖို့ အရမ်းကောင်းတာပဲ။ ဒီနှစ် နွေက တို့နှစ်ယောက်အတွက် ပျော်စရာကောင်းရမှာလေ။ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။ နင် လူနှစ် ယောက်နဲ့ တပြိုင်တည်း သူငယ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
နင် နင့်အတွက် တယောက်ယောက် ကို တွေ့သွားပြီဆိုတာ ငါသိပါတယ်။ အဲ့တယောက် ယောက် နဲ့ နင်နဲ့ကလဲ နင်နဲ့ ငါ ဘယ်တော့မှ မရှိလာမဲ့ “အထူးသံယောဇဉ်” (ဘာညာ အာပလာပေါ့) တွေရှိကြတယ် ဆိုတာ လဲ ငါသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါတို့မှာလဲ နောက်ထပ် “မထူးသံယောဇဉ်တမျိုး” ရှိသေးတာပဲလေ။ ငါတို့နှစ်ယောက် က အခင်ဆုံး အချစ်ဆုံး သူငယ် ချင်းတွေလေ။ နှစ်ယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်တွေလေ။ ဒါမှမဟုတ် အဲ့ဒီ သူငယ်ချင်း သံယောဇဉ် က နင်တယောက်ယောက် ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပျက်ပျောက်သွားတာလား။ ကြည့်ရတာတော့ အဲ့လိုဖြစ်ပုံရပါတယ်။ ငါကတော့ အဲ့တာ ကိုဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါက အဲ့ဒီ “အထူးတယောက်ယောက်” ကိုမတွေ့သေးဘူးလေ။ တွေ့ဖို့လဲ အလျင်မလိုနေပါဘူး။ ငါက ငါတို့ကြားမှာ ရှိတဲ့ အရာရာ ကို အဲ့အတိုင်းပဲရှိနေစေချင်တာ။
တကယ်လို့များ နောက်နှစ်တော်တော်ကြာကြာမှာ နင်က ငါ့နာမည်ကိုများ စကားစပ်မိလို့ ဖြစ်ဖြစ်များ ကြားမိရင်….“အော် ရိုစီလား၊ အဲ့နာမည်ကို ငါမကြားရတာ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ ကြာလှပေါ့။ ငါတို့တွေ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြဖူးတယ်လေ။ သူအခု ဘာတွေများ လုပ်နေမလဲမသိဘူး။ ခုတော့ သူနဲ့ မတွေ့ တာ၊ သတင်းမကြားတာ၊သူ့အကြောင်းမတွေးမိတာ နှစ်တွေ တောင်အတော် ကြာပေါ့” လို့ နင်ပြောမလားပဲ။ ငါ့အဖေနဲ့အမေ သူတို့ သူငယ်ချင်း ဟောင်းတွေနဲ့ ဆုံပြီး ထမင်းစားကြတဲ့အခါ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြောကြသလိုမျိုး နင့် လေသံက ဖြစ်နေမှာပါ။ သူတို့ ဘဝရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေအကြောင်း ပြန် ပြောကြတုံးကများဆိုရင် ငါ့ဘဝမှာ တခါမှမကြားဘူးတဲ့ နာမည်တွေကိုတောင် သူတို့ပြော တတ်သေး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် နှစ်ဆယ်လောက်တုံးက မေ့မေ့ရဲ့ သတို့သမီး အရံက အခုအခါမှာ ဘာလို့များ မေမေတခါတလေတောင် ဖုန်းမဆက်တော့တဲ့ လူစာရင်းဝင်သွားတာလဲမသိဘူး။ ဖေဖေဆိုလဲကြည့်ပါအုံး၊ သူ့အခင်ဆုံးဆိုတဲ့ ကျောင်းတုံးက သူငယ်ချင်းက ဘယ်မှာနေတယ် ဆိုတာတောင်မသိခဲ့ဘူးတဲ့လေ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ငါပြောချင်တာက (ရှိတယ်၊ ရှိတယ် ငါပြောချင်တာ ရှိသေးတယ်) ဘဝမှာ ငါက လွယ်လွယ်နဲ့ မေ့ပျောက်ခံလိုက်ရတဲ့ လူတယောက် ငါမဖြစ်ချင်ဘူး။ တချိန်တုံးက အရမ်း အရေးကြီး၊ အရမ်းတန်ဖိုးထားခံရ၊ အရမ်းလွှမ်းမိုးခဲ့၊ အရမ်းထူးခြားခဲ့ပေမယ့် နောင်နှစ် တွေကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ မှုံဝါးဝါး မျက်နှာတခုနဲ့ ငယ်နာမည်လေး ခပ်မေ့မေ့ဆိုတာ မျိုး မဖြစ်ချင်ဘူးလေ။ ဒီမှာ အဲလက်စ် ငါက ငါတို့နှစ်ယောက် ကို အခင်ဆုံး အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း တွေအဖြစ်ပဲ ထာဝရ မြင်ချင်၊ ဖြစ်စေချင်တာလေ။
နင်ပျော်နေတာကို ငါမြင်ရတော့ ငါလဲပျော်ပါတယ်။ တကယ်ပြောတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့လဲ မသိဘူး ငါက ချန်ထားခံရ သလိုခံစား ရတယ်။ ကြည့်ရတာ ငါတို့နှစ်ယောက်အတွက် အချိန် တွေက အရင်တုံးက ရှိနေခဲ့လို အခုတော့ ကုန်ဆုံးသွားပြီထင်ပါတယ်ဟယ်။ အခုနင့်ရဲ့ အချိန် တွေက ဘက်တနီ အတွက်ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်နော်။ တကယ်လို့ အဲ့လိုသာဆို ငါနင့်ကို ဒီစာ ပို့ပေးဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ မပို့ဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင် ငါဘာလို့များ အခုထိ ဒီစာကို ဆက်ရေး နေရသေးတာလဲနော်။ ကဲကဲ ငါသွားရတော့မယ်။ ငါလဲ အခုစဉ်းစားနေတဲ့ ငါ့ရဲ့ “ကြောင်ချက်” တွေ အကုန်လုံးကို မေ့လိုက်တော့မယ်။
အကြောင်းအရာ = ထောပတ်ခွက်လေး
ဟေး.ထောပတ်ခွက်လေး…နင်အိုကေရဲ့လား။ (နင့်ကို အဲ့လို မခေါ်ရာတာ ကြာလှ ပြီနော်!)။ နင့်ဆီက ဘာသံမှမကြား…နင့်ကိုမမြင်ရတာ တော်တော်လေး ကြာပြီ။ ဘာလို့ နင့်ကို ငါဒီ အီးမေးလ်ရေးရတာလဲဆိုတော့ နင့်အိမ်ကို ဖုန်းခေါ်တိုင်း နင်က ရေချိုးရင် ချိုးနေ မချိုးနေရင် အိမ်မှာ မရှိဘူးချည်းပဲ ဖြေဖြေနေတော့….. ဘာလဲ နင် ငါ့ကို စိတ်ကောက်နေတယ်လို့ ငါယူဆ လိုက်ရမလား။ ဒါပေမယ့် ငါသိခဲ့တဲ့ ရိုစီ က နင်နဲ့ ငါ့ကြားမှာ ပြဿနာ ရှိနေရင်တောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ရှင်းမယ့်လူမျိုးပါ။ ရှက်ပြီးရှောင်နေမယ့် မိန်းမ မျိုးမှ မဟုတ်တာနော်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ နွေကုန်သွားလို့ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ပြီဆိုရင် ငါတို့နေ့တိုင်းတွေ့ရတော့ မှာပဲ။ နေ့တိုင်း မြင်နေရလွန်းလို့တောင် မြင်နေရတာ ကို အမြင်ကပ်သွားနိုင်တယ်။ ဒီနှစ် က ငါတို့အတွက် ကျောင်းမှာ နောက်ဆုံးနှစ်ဆိုတာ မယုံနိုင်လောက်စရာပဲနော်။ အချိန်တွေကလဲ ကုန်တာမြန်လိုက်တာ။ နောက်နှစ် ဒီအချိန်ဆို ငါက ဆေးကျောင်းတက်နေပြီးတော့ နင်ကလဲ နင်အမြဲစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ ဟော်တယ် စီမန်ခန့်ခွဲရေး စူပါ မန်နေဂျာမကြီး ဖြစ်နေရောပေါ့။ အလုပ်မှာ နည်းနည်းရှုပ်နေတယ်။ ဖားသားကြီးက ငါ့ကို ရာထူးတိုးပေး(လိုက်သလိုလိုရှိ) တယ်ဟ။ အဲ့တော့ ငါအခု ဖိုင်တွေစီရတာ၊ နာမည်တွေလိုက်ကပ်ရတာထက်ပို အလုပ်ရှုပ်လာ ပြီပေါ့ဟာ (အခု ဖုန်းပါဖြေနေရပြီဟ)။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငါပိုက်ဆံလိုတယ်လေဟာ၊ ပြီးတော့ ဘက်တနီ ကိုလဲနေ့တိုင်းမြင်ရတာပေ့ါ။ “နဂါး” စားသောက်ဆိုင်က နင့်ရဲ့ ပန်းကန်ဆေးမှူးချုပ် အလုပ်ကော ဘယ်လိုလဲ။ အဲ့အလုပ်အတွက် ကလေးထိန်းဖို့ ကို နင်ငြင်းလိုက်တာကို ငါတော့ တကယ်အံ့သြတယ်။ အကြော်ဒယ်အိုးမှာ ကပ်နေတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်ဖတ်တွေကို ခြစ်ချခွာချ ပြီး နင့်လက်တွေ ပဲကြီးပွဖြစ်အောင် လုပ်နေရတာထက် တညလုံးအိမ်ထဲမှာနေပြီး အေးအေး ဆေးဆေး TV ကြည့်နေနိုင်တဲ့ဟာကို။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ ငါ့ကို မေးလ် ပြန်ရင်လဲပြန်၊ ဖုန်းဆက်ရင်လဲဆက်လိုက်ပေါ့။
အကြောင်းအရာ = လရောင်ခြည်လေး
ဘက်တနီ ကိုမုန်းလို့ ငါနင် နဲ့ သိပ်မတွေ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ (ဘက်တနီကိုတော့ မုန်းပါတယ်) ဘက်တနီကလဲ ငါ့ကို သိပ်မကြိုက်ဘူးလို့ထင်လို့ပါ။ မနှစ်က ကွန်ပျူတာ သင်တန်းမှာ သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါပြောတာတွေကို သူ့ငယ်ချင်းတယောက်ယောက် ကပြန်ပြောလိုက်လို့ဖြစ်မယ်။
ဒီကိစ္စကို နင်လဲသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကြည့်ရတာ သူက မိန်းမပျက်လို့ အခေါ်ခံရတာ တယ်ပြီး ကြိုက်ပုံ မပေါ်ဘူး။ တချို့မိန်းမတွေက ဘာလို့ အဲလို ခပ်ကြောင်ကြောင် အမြင်မျိုးရှိတာလဲ ငါမသိဘူး။ (ကွန်ပျူတာ သင်တန်းဆိုလို့ ပြောရအုံးမယ် တို့ဆရာ မစ္စတာဆင်ဆမ် ဒီနှစ်နွေမှာ လက်ထပ်လိုက်ပြီတဲ့။ ငါတော့ အံ့သြတာပဲ။ အိတ်ဇဲ (စာရင်းဇယား) သင်ခန်းစာတွေ ကိုငါ တော့ အရင်လိုအမြင်မျိုးနဲ့ ကြည့်ဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။)
နင့်မွေးနေ့တောင်ရောက်တော့မယ်နော်။ ဘာပဲပြောပြောနောက်ဆုံးတော့ နင် ဒီ “တရားဝင် လွတ်လပ်ခွင့်”တွေရတော့မယ် ကြီးတန်းဝင် မဟာကန့်သတ် အသက် ၁၈ ကိုရောက်လာခဲ့ ပြီပေါ့။ အပြင်ထွက်ပြီး တရားဝင်တဲ့ကိစ္စ တခုခုလုပ်ကြမလား (အင်း…အနည်းဆုံး နင့်အတွက် တော့ တရားဝင်ပြီပေါ့ဟာ)။ သွားကြမယ်ဆိုရင် ငါ့ကို ပြော။
ငါ့ကို နောက် ဘယ်တော့မှ ထောပတ်ခွက်ကလေး လို့မခေါ်ပါနဲ့။
အကြောင်းအရာ = ၁၈ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့
နင့်ဆီကနေ အသက်ရှင်နေသေးကြောင်း ကြားရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ ငါက စိတ် တောင် ပူစပြုနေတာ။ ငါ့ရဲ့မွေးနေ့လေး ကိုနင်နဲ့ အတူတူ ကျင်းပချင်ပါတယ် ……..
ဒါပေမယ့်…..ဘက်တနီ ရဲ့မိဘတွေက ငါနဲ့ ငါ့ရဲ့မိဘတွေကို ဟေဇယ် ဟိုတယ်မှာ ထမင်း ကျွေးမလို့တဲ့။ (မခမ်းနားဘူးလား?) အဲ့လိုမှ ငါတို့တွေ နှစ်ဘက်မိဘ အချင်းချင်းပါ ခင်မင်ကြ ရမှာလေ။ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ နောက် တညညပေါ့ ငါအစားပြန်ပေးပါ့မယ်။
အင်း…နင့်အတွက်တော့……..ဥုံ ပလုံတုံတုံ ဖိုးကြိုင်းတုတ်ပေါ့ဟာ….
ဘက်တနီ ကို ချီးပဲ
သူ့ မိဘတွေကိုလဲ ကို ချီးပဲ
ဟေဇယ် ကိုလဲ ကို ချီးပဲ
ပြီးတော့ နင့်ကိုလဲ ကို ချီးပဲ
ချစ်တဲ့ နင့်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်း
အကြောင်းအရာ = ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ
အဲ့တာဆိုလဲ ကောင်းပြီလေ။ စားကောင်းသောက်ကောင်းတွေ ကိုခံစားနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ။
အကြောင်းအရာ = ကပ်ဆိုးဆိုက်ခြင်း
အဲ့တာ တကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ငါမယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲ။ ငါနင့်အမေ ကိုစကားပြောဖို့ ဖုန်းဆက်လိုက်တုံး သူက အဲ့ဒီ သတင်းဆိုးကို ပြောပြတာ။ ဒီဟာ ငါကြားဖူးသမျှ သတင်းတွေ ထဲမှာ အဆိုးဆုံးသတင်း ပဲ။ နင် အချိန် ရရချင်း ငါ့ကိုဖုန်းဆက်ပါ။ နင့်သူဌေးက နင့်ကို အလုပ် ချိန်အတွင်းမှာ ဖုန်းပြောခွင့်မရှိပါဘူး လို့ချည်း ပြောပြောလွှတ်နေတယ်။ ထွက်လိုက်တော့လေ “ဘယ်တော့မှ ရုံးအလုပ်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ မစ္စတာကြီးရဲ့”။
ဒီကိစ္စကတကယ့်ကို မယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲ။ ငါအရမ်း စိတ်ပျက်နေတယ်။
Posted on February 13, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, သက်တံ့ တွေရဲ့အဆုံးမှာ (ပေးစာများ)2 Comments on သက်တံ့ တွေရဲ့အဆုံးမှာ အခန်း (၃)
ဧပရယ်လ ၈ ရက်နေ့ မနက်ဖြန် ကျရင် ကျမ သား အဲလက်စ် ဒီနေ့ သွားဆရာဝန်နဲ့ ချိန်းထားတာ ရှိလို့ ကျောင်းလာနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ခွင့်တိုင်ချင်ပါတယ်။
မနက်ဖြန် ဧပရယ်လ ၈ရက်နေ့ မှာ ကျမ သမီးလေး ရိုစီ ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အတွက် ခွင့်တိုင်တာပါ။ သူ ဆရာဝန်နဲ့ ချိန်းထားတာရှိလို့ပါ။
နင့်ကို ငါ မနက် ၈ နာရီ ခွဲ ကျရင် အိမ် ဟိုဘက်အကွေ့လေးနားမှာ တွေ့မယ်။ ပြီးတော့ လဲစရာအင်္ကျီတွေ အပိုထည့်လာဖို့မမေ့နဲ့နော်။ ငါတို့ ကျောင်းဝတ်စုံတွေနဲ့လျောက်သွားနေလို့ မဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ့ ဟာ နင့်ဘဝအတွက် တကယ့်ကိုအမှတ်တရ ဖြစ်ကျန်မယ့် အကောင်းဆုံး မွေးနေ့လေး ဖြစ်စေရမယ်လို့ ငါအာမခံတယ် ရိုစီ ဒွန်း။ ငါ့ကိုယုံစမ်းပါ။ ဟီးဟီး ငါတို့ ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ လစ်လို့ရမယ် ဆိုတာ ငါအခုထိမယုံနိုင်သေးဘူး။
၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီ ဟုတ်လား
သူတော်စင် ဂျိမ်းစ် ဆေးရုံး
ဧပရယ်လ ၁၀ ရက်နေ့
စာအိတ်ပါ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း ဟာ ဧပရယ်လ ၈ရက်နေ့က လူကြီးမင်းတို့ သမီးလေး ရိုစီ ဒွန်း ကို အစာအိမ်ဆေးပေးခ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
နင့်အမေက အိမ်ရှေ့မှာ အစာ ၇လ မစားရသေးတဲ့ ကင်းစောင့်ခွေးတကောင်လို ဒေါသတကြီး စောင့်နေတယ်။ ကြည့်ရတာ နောက် ၁၀နှစ်တောင် နင့်ကို ငါထပ်တွေ့ရတော့မယ်မထင်ဘူး။ နင့်ရဲ့ နင်သိပ်ချစ်တဲ့(တယ်မထင်) ချစ်မမကြီး ကနင့်ဆီကို ဒီစာလေးပေးပေးဖို့ သဘောတူ လိုက်တယ်ဟ။ နင်သူ့ကို ဒီတခါတော့အကြွေးတင်သွားပြီပေါ့ဟာ။
ဟိုတနေ့က ကိစ္စအတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူးဟာ။ နင်မှန်တယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့။ ငါတို့ တက်ကီလာ မသောက်သင့်ဘူး။ သနားစရာ ဆိုင်ရှင်တော့ ငါတို့ကိုရောင်းလိုက်တဲ့အတွက် ဆိုင်တောင် ပိတ်ရမလားမသိပါဘူး။ ငါ့သူငယ်ချင်း ငါတို့ နှစ်ယောက်အတွက် လုပ်ပေးတဲ့ မှတ်ပုံတင်အတုတွေက အိုကေပါလိမ့်မယ်လို့နင့်ကို ငါပြောသားပဲမှလား။ တခုပဲ နင့် မှတ်ပုံတင် မှာ မွေးရက်က ဖေဖော်ဝါရီလ ၃၁ ရက်ဖြစ်နေတယ်။။ ဟိဟိ။
အဲ့ဒီနေ့က ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နင်မှတ်မိတာရှိသေးရင် ငါ့ဆီစာရေးပါအုံးဟာ။ နင့်အစ်မ စတက်ဖနီ ကို ကြားကနေ စာတွေပို့ခိုင်းဖို့ စိတ်ချရပါတယ်။ သူကျောင်းထွက်ချင်တာ ထွက်ခွင့် မပေးလို့ နင့်အမေ ကို သူက စိတ်ကောက်နေတော့ ငါတို့ ကိုကူပါလိမ့်မယ်။ ဖီးလ် နဲ့ မာဂရက် ကသူတို့ မှာ နောက်ကလေးတယောက်ရနေပြီလို့ ကြေညာလိုက်တော့ ငါအခုဆိုရင် နှစ်ထပ် ကွမ်း ဦးလေးဖြစ်ပြီပေါ့ဟာ။ ဘာပဲ ပြောပြော အဲ့သတင်းက ငါ့အပေါ်တော့ စောင့်ကြည့်နေတာ တွေလျော့ သွားစေတယ်ဟ။ ဘာပဲပြောပြော အပြောင်းအလဲလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့လေ။ ဖီးလ်ကတော့ နင့်နဲ့ ငါ လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် ရယ်ချည်း နေ တော့တာပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က သူ့ကိုယ်သူ ပြန်မြင်ရလို့တဲ့လေ။
နေမြန်မြန်ပြန်ကောင်းလာပါစေ အရက်သမလေးရေ။ နင်သိလား အရင်က လူသားတွေရဲ့ မျက်နှာ ဟာ ဘယ်တော့မှ အစိမ်းရောင်မဖြစ်သွားနိုင်ဘူးလို့ ငါထင်ထားခဲ့တာဟ။ ကြည့်ရတာ နင်က နင်ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို တော်တယ်ဆိုတာ ရှာတွေ့သွားပြီထင်တယ် ရိုစီမရေ….
ငါသေတော့မယ်ဟဲ့။ ငါ့ခေါင်းကို တူနဲ့ တယောက်ယောက်က ထုနေသလိုပဲ။ ငါ့ဘဝ တလျောက်လုံးမှာ ငါတခါမှ ဒီလောက်ခေါင်းကိုက်ပြီး ဒီလောက်နေမကောင်းမဖြစ်ဘူးသေးဘူး။ မေမေ နဲ့ ဖေဖေ ကတော့ အကြီးအကျယ် ဒေါသတွေထွက်နေတာပေါ့။ တကယ်ပြောတာ နောင်ကို နင့်ကို ဒီအိမ်မှာ ဘယ်တော့မှ လက်ခံတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါ့ကို လဲသူတို့ က အိမ်ထဲမှာ အသက် ၃၀ အထိ အကျယ်ချုပ်နဲ့ ထားကြတော့မှာ။ ပြီးတော့ နင့်နဲ့ တွေ့ခွင့်ကိုလဲ ပိတ်ပင် လိုက်ပြီတဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နင်က ငါ့အတွက် မကောင်းတဲ့ အပေါင်းအသင်း မို့လို့တဲ့လေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခေါက်ထားလိုက်ပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ မနက်ဖြန်ကျတော့ ကျောင်းမှာ နင့်ကို ငါတွေ့ရအုံးမှာပဲ။ အင်း တကယ်လို့ သူတို့က ငါ့ကို ကျောင်းသွားခွင့်ပါပိတ်ပင် လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့သလိုဆိုလဲ ငါ့အတွက်က ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ပိုတောင်ကြိုက်သေး။ ဟဲ့ တနင်္လာနေ့မနက်ကျရင် သင်္ချာ ချိန်က နှစ်ချိန်တောင်နော် သင်္ချာ (၁) ကော သင်္ချာ (၂) ကော။ ငါတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် ငါ့ရဲ့ အစာအိမ်ကိုသာ နောက်ထပ် ၅ ခါလောက် ထပ် အဆေးခံလိုက်ချင်တော့တာပဲ။ အိုကေဟာ။ တနင်္လာနေ့ကျမှတွေ့မယ်။
ဟဲ့ စကားမစပ် နင်မေးထားတာ ကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်…….
အဲ့ဒီနေ့ ညက ရွံစရာကောင်းတဲ့ ဘား ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ငါ့မျက်နှာ ရိုက်မိတာရယ်၊ ကြယ်တွေ လတွေမြင်ပြီး မျက်လုံးတွေ ပြာထွက်သွားတာရယ်၊ ဥသြသံအကျယ်ကြီးတွေရယ်၊ အရှိန်နဲ့ အမြန်မောင်းနေတဲ့ ကားတွေရယ်၊ သေလောက်အောင် အန်နေရတာရယ်တွေကလွဲရင် ငါတော့ ဘာမှသိပ်မမှတ်မိတော့သလိုပဲ။ ငါထင်ပါတယ်လေ အဲ့တာ ဆိုကုန်လောက်ပါပြီ။ ငါမသိသေးတာ များ ရှိသေးသလား?
နင့်ဘက်မှာ အစစ အရာရာ အခြေအနေ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ အိမ်မှာ လဲအမေ နဲ့ အဖေ က ငါ့ကို ရေလည်ကွိုင်နေတယ်ဟ။ တနေကုန်ပွားနေတာပဲဟာ။ ငါတော့ ကျောင်းတောင်မြန်မြန်ပြန်တက်ချင်နေပြီ။ အနည်းဆုံးတော့ နားပူတာ သက်သာမယ်မှလား။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ သမီးလေး ရိုစီ ရဲ့ လတ်တလော အပြုအမူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ပင်ဖို့အတွက် ကျတော်တို့ လူကြီးမင်းတို့နဲ့ ချက်ချင်း အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ထိုင်ချင်ပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ လတ်တလော အပြုအမူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်တော်တဲ့ အပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ ကိုလဲ သဘောတူညီမှု တခုခုရတဲ့အထိ ဆွေးနွေးရပါလိမ့်မယ်။ ဒီကိစ္စရဲ့အရေးကြီး ပုံကို လူကြီးမင်းတို့ လဲသဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲလက်စ် စတီးဝပ်ရဲ့ မိဘတွေလဲ အစည်းအဝေးမှာ ပါပါလိမ့်မယ်။
တနင်္လာနေ့မနက် ၉ နာရီကို စည်းဝေးကြဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
အကြောင်းအရာ = ကျောင်းမှ ခေတ္တခဏ ရပ်နားခြင်း
ဘုရားရေ၊ ချီးတဲ့မှပဲ။ အဲ့ဒီ အဘိုးအို ဘွတ်ဂီကြီးက ငါတို့ ကို ကျောင်းကနေ ခဏနားခိုင်းမယ် ဟုတ်လား။ မယုံနိုင်စရာပဲ။ သူပြောနေတဲ့ ပုံစံက ငါတို့ကပဲ ပုဆိန် တလက်နဲ့ လူလိုက်သတ် နေတာကျနေတာပဲ။ ဘုရားရေ ဒီဟာက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံ အပြစ်ပေးနည်းပါပဲလား။ ကျောင်းမသွားရတော့တဲ့အတွက် ငါကတော့ အိပ်ရာထဲမှာ တပတ်လုံးကို နှပ်ပြီး အရက်နာ ကျတာ ကိုဖြေပစ်လိုက်အုံး မယ်။ တယ်ကောင်း ဟာဟ။
အကြောင်းအရာ = ငါ ငရဲကျနေပြီ
ဘဝ ကနင့်အတွက် သိပ်သိပ် သာယာနေတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ နင့်ဆီကို ငါ ကမ္ဘာ့ စိတ်မချမ်းသာစရာအကောင်းဆုံးနေရာကနေ အီးမေးလ်ရေးနေတာ။ ရုံးတဲ့။ ငါတပတ်လုံးလုံး ဖေဖေနဲ့ အတူ ရုံးမှာ ကူရမတဲ့လေ။ ချီးထုပ်တွေကို ဖိုင်စီပြီးတော့ တံဆိပ်ခေါင်းတွေကို လျှာနဲ့ ယက်ပြီး တံတွေး ဆွတ်ရမယ်တဲ့။ ငါဘုရား အဆူဆူမှာ တခါတည်းကျိန်စာ ဆိုလိုက်မယ်။ ငါ့ဘဝမှာ ဘယ်တော့မှ “ဘယ်တော့မှ” ရုံးခန်းဆိုတဲ့နေရာ မှာတသက်လုံး အလုပ်မလုပ်ဘူး။ ပြီးတော့ ဘိုးတော်က ငါ့ကို လုပ်အားခလဲမပေးဘူး။ ချီးလိုမှပဲ။
ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟား….ငါဘာရေးမလို့လဲဆိုတာ ငါမေ့သွားပြီ။ အော်…..သတိရပြီ …. ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟား…. ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟား…. ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟား…. ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟား…. ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟား….
အချစ်များစွာဖြင့် နူးညံ့စွာနွေးထွေးမှုနှင့်ပြည့်စုံနေသော အိပ်ချင့်ဖွယ်ရာ ပျော့အိအိ မွေ့ယာပေါ်မှာ ချစ်စဖွယ် ရိုစီလေး စာပြန်လိုက်သည်။
အကြောင်းအရာ = ငပျင်းမ
ငါလုံးဝ သောက်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ရုံးခန်းထဲမှာ ရေရေလည်လည် “လန်း” တဲ့ ဆော်တပွေ အလုပ်လုပ်နေတယ်။ ငါ သူ့ကို ယူမှာ ငှဲငှဲငှဲ။ ကဲ အခု ဘယ်သူ ရယ်ရမယ့်အလှည့်ပါလိမ့်?
အကြောင်းအရာ = နှာဘူးကောင်
မိန်းမချင်းမကြိုက်သူ မှစာပြန်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် လုံးဝ လုံးဝ မနာလိုမဖြစ်မိပါ။
သို့ = ရိုစီ
အကြောင်းအရာ = မိန်းမချင်းမကြိုက်သူတဦးထံသို့
လောလောဆယ် အတော်အတွင်း အထက်ပါ အတိုင်း သင့်အား ခေါ်ဆိုချင်းအားဖြင့် သင်သည် ထိုမှတပါး မိန်းမချင်းကြိုက်နှစ်သက်သူမဟုတ်ကြောင်း နောက်နောင် သက်သေ မပြနိုင်သေးခင်ကာလအထိ အကျွန်ုပ် သင့်ကို ပြက်ရယ်ပြုပါမည်။
သူမ သည် ဘက်တနီ ဝီလျံ ဟုခေါ်ဆိုသော အသက် ၁၇ ရှိပြီးဖြစ်သော အရွယ်ရောက် အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပါသည်။ သူမတွင် အလွန်ကြီးမား၊ ပြီးပြည့်စုံ၊ လှပသော ရင်သားတစုံနှင့် အကျွန်ုပ် မြင်ဖူးသမျှ မိန်းမတကာတို့တွင် အရှည်ဆုံးသော ခြေတံလှလှ များရှိပါသည်။
အကြောင်းအရာ = မစ္စတာ လိင်နတ်ဘုရား (အော့ အော့ အဟွတ် ဝေါ့ အော့ အော့)
ကြားရသမျှကတော့ဖြင့် ကုလားအုတ်မ လိုလိုပါပဲလား။ သူမက သိပ်သိပ် သဘောဖြူသူ (မည်းပုပ်ပုပ်) ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ နင် သူ့ကို နှုတ်ဆက်စကားတခွန်းတော့ ပြောပြီးရောပေါ့နော်။ ဒါမှမဟုတ် နင့်ရဲ့ အနာဂတ် အိမ်ထောင်ရှင်မ က နင်လူ့ပြည်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကော အသိအမှတ်ပြုမှု ရပြီးပလား? (နင့်ကို ကော်ပီကူးစရာတွေ လှမ်းလှမ်းပေးနေတာက လွဲရင်ပေါ့လေ)။ အဟွတ် အဟွတ် ရယ်ချင်လိုက်တာ။
သင့်ကို အဲလက်စ် မှ စကားလှမ်းပြောနေပါသည်။
အဲလက်စ်းဟယ်လို မမရိုစီ နင့်အတွက် သတင်းတခုရှိပါတယ်။
ရိုစီးကျေးဇူးပြုပြီး အေးအေးနေစမ်းပါဟာ။ ဒီမှာ ငါ မစ္စတာ ဆင်ဆမ် သင်တာကို အာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။
အဲလက်စ်းအလို………….ဘယ်လိုပါလိမ့်………….ဘာလဲ နင်တို့ မိန်းကလေးတွေ ပြောပြောနေကြတဲ့ မျက်ဝန်းလဲ့ပြာပြာနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အမောင်ဆရာ ကြောင့်လား…?
ရိုစီးမဟုတ်ပေါင်။ ငါအခု စာရင်း၊ ဇယား တွေကို အရမ်း အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေပြီဟဲ့။ တပတ်လုံးလုံး ဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့တောင် ငါထိုင်လုပ်နေနိုင်ပြီ။ သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲသိလား?
အဲလက်စ်းအော်………….အေး ငါသိပြီ။ နင်လဲ ကြမ်းပိုးတကောင်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့။
ရိုစီးငါနင့်ကို ရွဲ့နေတာဟဲ့ ငတုံးကောင်ရဲ့။ ဒီချီးထုပ် ဇယားတွေကို ငါအသေမုန်းတယ်။ ဆရာရှင်းပြတာကို နားထောင်နေရင်းနဲ့တောင် ငါတော်တော်ဦးနှောက်ခြောက်နေပြီဟဲ့။ ဒါပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင် ငါ့ကိုမနှောက်ယှက်ပါနဲ့။ ဝေးဝေး သွားစမ်းပါ။
အဲလက်စ်းဒါဆို ငါပြောမယ့် သတင်းကိုနင် နားမထောင်ချင်တော့ဘူးပေါ့လေ?
ရိုစီးလုံးဝပဲ။
အဲလက်စ်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါကတော့ ပြောရမှာပဲ။
ရိုစီးကဲကဲ ဒီလောက်ပြောချင်နေလဲပြော… ဘာလဲ နင့်အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းက?
အဲလက်စ်းနင်ပြောမယ့် စကားလုံးတွေအကုန်လုံးကို နင်ပြန်ပြန်သာမျိုလိုက်တော့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကောင်လေးတယောက်က လူပျိုမဟုတ်တော့ဘူး…….
အဲလက်စ်းဟယ်လို……
အဲလက်စ်းနင်ရှိသေးလား…..
အဲလက်စ်းရိုစီ နောက်မနေနဲ့တော့……
ရိုစီးအမ်…………….ဆော်ရီး….ငါ….ငါ့ကုလားထိုင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျပြီး မေ့လဲသွားလို့။ နင်က နင့်ကိုနင် လူပျိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ငါ့ကိုလာ ပြောနေတယ်လို့ ငါအိပ်မက်မက်နေလို့…။
အဲလက်စ်းအိပ်မက်မဟုတ်ဘူးဟေ့။
ရိုစီးဘာလဲ ဒါဆို နင်ဆိုလိုတာက နောက်နောင်ဆိုရင် နင်ဘောင်းဘီအရှည်ပေါ်မှာ အောက်ခံဘောင်းဘီ ထပ်ထပ် ဝတ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ ပြောချင်တာပေါ့လေ။
အဲလက်စ်းဆိုလိုချင်တာက အီဖေကို က နောက်ဆိုရင် အောက်ခံဘောင်းဘီ လုံးဝ လုံးဝ ဝတ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ ပြောချင်တာ။
ရိုစီးကဲ………ပြောပါအုံးအဲ့တာဆို ဘယ်သူကများ ကံဆိုးသူမယ်ရှင်လေးပါလိမ့်….ဘုရားမလို့ ဘက်တနီလို့တော့ လုံးဝမပြောလိုက်နဲ့နော်……ဘုရား ဘုရား…..
အဲလက်စ်းဟားဟား စိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်။ ဘက်တနီကလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား…
အဲလက်စ်းဟယ်လို……………
အဲလက်စ်းရိုစီ…………
ရိုစီးဘာလဲ?
အဲလက်စ်းအဲ့တော့…..
ရိုစီးအဲ့တော့………ဘာဖြစ်သလဲ?
အဲလက်စ်းအဲ့တော့ တခုခု ပြောအုံးလေဟာ။
ရိုစီးနင့် ငါ့ကို ဘာပြောစေချင်မှန်း ငါတကယ်မသိဘူး အဲလက်စ်။ ငါထင်တာကတော့ နင် ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းတွေရှာသင့်ပြီထင်တယ်။ ဘာလဲ နင့်ကို ငါကများ လည်ကုတ်ကို နဘန်ကျင်းပြီးတော့ “ဟေ့ကောင် ချီးထုပ် ငါ့ကို အသေးစိတ်ပြောပြစမ်း ” လို့ သွားရည် တမြား မြား နဲ့ ပြောမယ်ထင် လို့ လား။
အဲလက်စ်းအာ….နင်ဘယ်လိုမြင်လဲ ပဲ ငါ့ကိုပြောစမ်းပါဟာ။
ရိုစီးအေး ကောင်းပြီ။ ရိုးရိုးသားသားပြောတာနော်။ နင်ပြောသမျှကနေ ငါမြင်တာကတော့ သူက ခပ်ပျက်ပျက်ထဲကပဲ။
အဲလက်စ်းဟာ တော်စမ်းပါ။ နင်ကဖြင့် သူ့အကြောင်းကိုသိဖို့ မပြောနဲ့ သူ့ကို မြင်တောင်မမြင်ဘူးဘဲနဲ့။ ဘာလဲ နင်က တယောက်ယောက်နဲ့ အိပ်တိုင်း အဲ့ဒီ လူ တယောက်ကို အပျက်လို့ပြောတာလား?
ရိုစီးငါသူ့ ကို မြင်မြင်နေတာပဲ (နည်းနည်းလေးတော့ ပိုပြောလိုက်မယ် ငနာကောင်) နောက်ပြီးတော့ နင်သိအောင်ပြောရရင် မတူတဲ့ မထပ်တဲ့ လူတကာနဲ့ ရက်သတ္တပတ်ရဲ့ မတူတဲ့နေ့တွေမှာ လိုက်လိုက်အိပ်တဲ့ လူတွေကို ငါက အပျက်တွေလို့ခေါ်တာ။ ရှင်းလား။
အဲလက်စ်းအဲ့တာ တကယ်မဟုတ်တာ နင် သည့် ပါတယ်။
ရိုစီးနင် အခုထိ “သိ” ကို စာလုံးပေါင်းမှားနေတုံးပဲ။ “သိ” ဟဲ့ “သည့်” မဟုတ်ဘူး။
အဲလက်စ်းအဲ့ဒီ “သိ” နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်စမ်းပါဟာ။ နင်အဲ့ဒီ သည့် ကိစ္စ ကိုပြောပြောနေ တာ ငါတို့ ၅ နှစ်သား လောက်ကတည်းကပဲ။
ရိုစီးသိပ်မှန်တာပေါ့။ အဲ့တော့ နင်အခုပြင်တော့မယ် မှလား။
အဲလက်စ်းတော်ပြီဟာ။ ငါပြောတာတွေ အကုန်မေ့လိုက်တော့။
ရိုစီးဒီမှာ အဲလက်စ်။ ငါက နင့်ကို တကယ်စိတ်ပူလို့ပါ။ နင်သူ့ကို သဘောကျနေတာ၊ နင့်ခံစားချက်တွေကို ငါသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါပြောချင်တာက သူက ဘယ်တော့မှ လူတယောက်တည်းကိုပဲ အတည် တွဲမယ့် မိန်မမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။
အဲလက်စ်းဒါပေမယ့် အခု ဟုတ်သွားပြီလေ။
ရိုစီးဒါဆို နင်တို့ နှစ်ယောက် အတူတူ တွဲပြီး အပြင်တွေဘာတွေ ချိန်းတွေ့လေ့ရှိကြသလား?
အဲလက်စ်းအင်းပေါ့။
ရိုစီးအင်း……………………ပေါ့
အဲလက်စ်းနင့်ကြည့်ရတာ သိပ်ကို အံ့သြသွားသလိုပဲ။
ရိုစီးငါကတော့ ဘက်တနီ ဆိုတဲ့မိန်းမက လူတွေနဲ့ တွဲသွားတွဲလာ ချိန်းတွေ့တတ်တယ် မထင်ဘူး။ သူက လူတွေနဲ့ အိပ်ပဲ အိပ်တာလေ။
ရိုစီးအဲလက်စ်…………
ရိုစီးကဲပါ ကဲပါ ငါတောင်းပန်ပါတယ်။
အဲလက်စ်းရိုစီ နင် အဲ့လိုပြောနေတာတွေ ရပ်သင့်ပြီ။
ရိုစီးအင်းပါ။ အင်းပါ။ ငါ “သည့်” ပါတယ်
အဲလက်စ်းဟားဟားဟား
မစ္စတာ ဆင်ဆမ်းမင်းတို့ နှစ်ယောက်စလုံး အခုချက်ချင်း ကျောင်းအုပ်ကြီး ရုံးခန်းကို လာခဲ့ပါ။
ရိုစီးရှင်……….ဆရာ။ သမီး ဆရာ ရှင်းပြတာကို နားထောင်နေတာပါ။
မစ္စတာ ဆင်ဆမ်းရိုစီ ငါဘာမှမပြောတော့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ မိနစ်ကတည်းကပဲ။ မင်းတို့ အခု က ငါပေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြေနေရမှာ။
ရိုစီးဟုတ်ပါတယ် ဆရာရယ်။ အဲလက်စ် က သမီးအတွက် မကောင်းတဲ့ အပေါင်းအသင်း ပါ။ သမီးကို စာကောင်းကောင်း လုပ်လို့မရအောင် အမြဲလိုလို တခုမဟုတ်တခု အနှောင့်အယှက် ပေးနေတာပါ။ သမီး အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။
အဲလက်စ်းဆရာ၊ ကျတော့မှာ ရိုစီ ကိုပြောစရာ ကိစ္စ တခုရှိနေလို့ပါ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီကိစ္စက လဲမစောင့်နိုင်တော့လို့ပါဆရာ။
မစ္စတာ ဆင်ဆမ်းငါသိပြီးပြီ အဲလက်စ်။ အဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာ မင်းအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အဲလက်စ်းဗျာ …….ဆရာ က ဘာကိစ္စ မှန်းဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲဗျ။
မစ္စတာ ဆင်ဆမ်းတကယ်လို့သာ မင်းတို့ နှစ်ယောက် က ဆရာ စာသင်နေတုံး တခါတလေ လေးများ အာရုံပြုပြီး နားစိုက်ထောင်မိမယ်ဆိုရင် ဆရာ ပြောနေတာတွေက အရမ်း စိတ်ဝင် စားစရာ ကောင်းတာတွေ့လိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Chat ထဲမှာ အပြန်အလှန် စကားပြောနေ ကြတာ ကို သူများတွေမမြင်အောင်ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့။
အဲလက်စ်းဗျာ……..ဆရာ ဆိုလိုတာက.. အဲ့တာဆို ကျတော်တို့ ပြောနေတာတွေ အားလုံးကို ဒီအခန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေ အကုန် လိုက်ဖတ်နေနိုင်တယ်ပေါ့…..ဟုတ်လား။
မစ္စတာ ဆင်ဆမ်းသေချာတာပေါ့ကွာ။
အဲလက်စ်းဘုရားရေ။ သေလိုက်ပါတော့ဗျာ။
ရိုစီးဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား
မစ္စတာ ဆင်ဆမ်းရိုစီ…
မစ္စတာ ဆင်ဆမ်း“ရိုစီ”
ရိုစီးဟုတ်ကဲ့ဆရာ။
မစ္စတာ ဆင်ဆမ်းအခန်းထဲကနေ ခုချက်ချင်း ထွက်သွားစမ်း။
အဲလက်စ်းဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား
မစ္စတာ ဆင်ဆမ်းမင်းရောပဲ။ မောင်အဲလက်စ်။
Posted on February 11, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, သက်တံ့ တွေရဲ့အဆုံးမှာ (ပေးစာများ)2 Comments on သက်တံ့ တွေရဲ့အဆုံးမှာ အခန်း (၂)